Akụkọ - Kedu uru na ọghọm dị na faucets rọba
Kedu uru na ọghọm dị na faucets rọba
Enwere ọtụtụ ihe mgbawa n'ahịa. Na mgbakwunye na ọkpọkọ igwe anaghị agba nchara nkịtị.ọkpọkọ ọkpọkọa na-ejikwa ọtụtụ ebe. Yabụ kedu uru na ọghọm dị na faucets rọba? Kedu ka esi azụta ọkpọkọ rọba? Ka anyị lee anya:
Kedu uru na ọghọm dị na faucets rọba?
1. Nnukwu okpomọkụ na-eguzogide ma dị ike
Igwe mmiri rọba nwere ezigbo kemịkalụ na ihe mkpuchi nke plastik. Igwe mmiri rọba nwere ezigbo nguzogide okpomọkụ yana ọ dịghị mfe ịcha. Karịsịa, ọtụtụ n'ime ọkpọkọ rọba dị n'ahịa bụ nke ABS rọba. ABS plastic bụ ihe ọhụrụ nke na-adịghị egbu egbu na nke na-enweghị ụtọ, nwere ihe ndị dị mma nke kemịkal na ihe mkpuchi ọkụ eletrik. Ọ na-etinye uche dị iche iche Njirimara nke ps, san, na bs ihe. , Ọ nwere magburu onwe n'ibu Njirimara dị ka ike, ike na rigidity.
2. Nchekwa gburugburu ebe obibi na ahụike
Igwe mmiri rọba nwere mmetụta na-eguzogide mmetụta dị mma, ezigbo nkwụsi ike nke mpụga, enweghị nrụrụ, ịdị arọ dị arọ, enweghị unyi, nchara, enweghị isi, ọnụ ala, ihe owuwu dị mfe, yana ọ bụ ngwaahịa ọkpọkọ na gburugburu ebe obibi na ahụike.
3. Ezi nguzogide corrosion
Igwe mmiri rọba nwere ngbanwe nke rọba n'otu oge ahụ, mgbanwe dị mma nke ukwuu, na ọkpọkọ plastik nwere obere mmiri na-amịpụta mmiri, ezigbo nkwụsị nke corrosion na ntinye dị mfe.
Kedu nha n'ozuzu nke ọkpọkọ rọba ezinụlọ
Igwe mmiri ọkụ ụlọ n'ozuzu bụ isi anọ, isi isii (nha nha inch). Nke ahụ bụ aha 15 ma ọ bụ 20 (mm). gosi dayameta nke nozzle.
Ọ bụrụ na a na-eji ọkpọkọ mmiri gị akara na Φ25 × 1/2, ọ pụtara na dayameta dị n'èzí bụ 25. N'ezie n'ezie kwekọrọ n'ọnụ ọnụ dayameta bụ DN20 (nke a na-akpọkwa 6 isi), ị nwere ike ịzụta 6 isi ọkpọkọ. Ị nwekwara ike ịzụta ọkpọkọ rọba nke nwere isi anọ.
Oge nzipu: Dec-13-2021